Tape Gaffer Mini-Gaff - Jiro amin'ny MediaLight Bias
Home Tape Gaffer Mini-Gaff
by Jiro amin'ny MediaLight Bias
Vidiny tany am-boalohany $3.50 - Vidiny tany am-boalohany $3.50
Vidiny tany am-boalohany $3.50
Vidiny ankehitriny $3.50
Maimaimpoana ity vokatra ity raha ampiana amin'ny kaomandin'ny jiro bias (ampio ny hazavanao mitongilana amin'ny harona fiantsenana ary ho hitanao ny safidy hanampy azy io maimaim-poana).
Alefanay any amin'ny aficionados an-trano manerana izao tontolo izao ny vokatray, fa ny fakantsika dia ao amin'ny fiarahamonina sarimihetsika sy aorian'ny famokarana.
Ary fitaovana iray malaza be amin'ny sarimihetsika sy ny fahitalavitra ny gaffer tape, nefa tsy zavatra ananan'ny mpampiasa trano maro no mandry.
Hevero ho toy ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy tsy dia malaza loatra. Izy io dia miraikitra amin'ny saika ny faritra rehetra ary mivoaka tsy mamela sisa miraikitra. * (Na izany aza, tokony hotandremana tsara amin'ny rindrina vita amin'ny hosodoko - TSY toy ny fantsom-baiko ity ary afaka manala loko malalaka). Na izany aza, azonao atao ny mampiditra azy ireo amin'ny jironao sy ny sisa tavela ho an'ny fitantanana tariby.
* Ny takelaka gaffer dia afaka mamela tsipika reside maina (tsy miraikitra) manaraka ny sisiny sasany ary rehefa ela be tokoa. Afaka esorina mora foana ity amin'ny kasety hafa.
Misy fomba roa ampiasako azy hanambatra jiro mitanila:
Ny fomba tsy misy peel (manisy jiro ny jiro): Aza esorina ny famerenan'ny mena ny MediaLight anao, fa ampiasao kasety mini-gaffer 2 "eo anelanelan'ny LED 3 na 4." (1 "lava ny tadiny lava tsy dia ampy loatra - ary ny faritra sasany mahatohitra mbola tsy sendra dia mety mitaky fanampiny ravina kasety).
Ny fomba aloka (mifikira ny jiro amin'ny kasety): Apetraho eo amin'ny toerana kasainao hametahana jiro ny kasety gaffer - drafitra manodidina ny aorian'ny fahitalavitra. Apetaho amin'ny kasety gaffer ny jiro. Afaka taona vitsivitsy dia azonao esorina amin'ny kasety ny jiro.
Miasa tsara ireo fomba roa ireo, fa OCD kokoa noho ny ankamaroantsika izahay, ka aleonay ilay "fomba aloka."
Raha toa anay ianao, dia variana amin'ny antsipiriany rehetra ianao, ao anatin'izany ny fahadiovanao afaka manala ireo jiro fitongilananao amin'ny ho avy. Hamela ambiny ve izany? Ho sarotra esorina ve ny jiro? Raha zavatra mandalo ao an-dohanao ireo dia ampio horonam-peo mini-gaffer maimaimpoana ho an'ny baikonao ary aza miahiahy intsony.
Ho hitanao fa mandoa $ 3.50 ho an'ny kasety mini-gaffer izahay. Anisan'izany ny fandefasana. Na izany aza, ampio amin'ny baiko maivana ary tsy andoavam-bola izany.
Aza hadino fa: Ity dia fanao MINI-ROLL mahazatra, ka na dia toa mitovy amin'ny refin'ny horonana lehibe (sahala amin'ny haben'ny horonan-kasety), 1 "ihany ny sakany ary 10 metatra ny halavany. Mety tsara amin'ny fametahana azy io jiro mitongilana, amin'ny fitantanana tariby, ary kely ampy hitondrana azy ao anaty boaty solosainao. Mibaiko ny kasety Gaffer, ary faly izahay manolotra azy maimaim-poana ho tombontsoa fametrahana hafa.
Raha tsy izany, afaka mahita kasety gaffer ianao eo anelanelan'ny $ 8- $ 20 amin'ny Internet amin'ny horonan-tany an-tokotany miisa 2 "30. Namboarinay ireo horonan-taratasy manokana mba hahafahanay misintona azy ireo amin'ny baiko nefa tsy mampiakatra ny vidin'ny fandefasana ary satria mora kokoa ny mitondra azy ireo noho ny horonan-taratasy goavambe.
5.0 Miorina amin'ny 1 Reviews
Ahitana taratra ny halehiben'ity orinasa ity
Addon mahafinaritra toy izany ary mampiseho ny tsy mampino an'ity orinasa ity
Tape MediaLight Black Mini-Gaffer (Maimaimpoana amin'ny fividianana jiro tsy mitongilana)